Izitokhwe ezi-5 zaseSpain kwimozulu ezantsi ukwehla kwezoqoqosho Ezezimali
Izitokhwe ezi-5 zaseSpain kwimozulu ecothayo
I-European Central Bank (i-ECB) kutshanje ihlaziye uqikelelo lwayo lwezoqoqosho kumazwe ase-euro kule minyaka izayo. Apho kuye kwacaca ukuba kunyaka ophelileyo ukukhula kuye kwaba yi-1,8%, emele esona santya sicothayo ukusukela ngo-2014. Ngeli xesha lowama-2019, uqikelelo lubona ukuba luzakonyuka malunga ne-1,1% xa kuthelekiswa ne-1,7% eyayiqikelelwe ngoDisemba. Uqikelelo lwamaziko oluntu alukhomba ekubeni lwehle ukusuka kwi-1,7% ukuya kwi-1,6% kwaye lushiya umbono wayo ngo-2021 kumanqanaba afanayo, eyi-1,5%.
Le meko kwilizwekazi lakudala ingasebenza ekuqwalaseleni iphothifoliyo elandelayo yokhuseleko olukwiiparitha zokuncipha kwezoqoqosho. Kunye Izindululo ezintsha zentengiso yesitokhwe kunye nokuhlengahlengisa kwezinye ezingalinganiyo kule panorama yamanye amazwe. Eyona njongo ikhawulezileyo yokuphelisa unyaka ngebhalansi elungileyo kwisitetimenti sengeniso sabatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona kunjalo umsebenzi awuzukuba lula kakhulu ukuwenza ngenxa yokungazinzi okunokubonelelwa ziimarike zezabelo. Ngaphandle kokuqwalaselwa kobuchwephesha kwamanye amaxabiso emarike yaseSpain.
Kwelinye icala, eli qhinga lokujongana nokudodobala kwezoqoqosho iya kuphuhliswa ngononophelo olukhulu kwisitokhwe esikhethiweyo. Apho kuya kufaneleka kakhulu ukuba kuthathelwe ingqalelo xa kukhethwa kukhuseleko lwesitokhwe olungenalo icandelo eliqinileyo lokuqikelela kwaye ngenxa yoko kunokwenzeka kakhulu ukuba ulahlekelwe yimali eninzi kwimisebenzi eqhutywa kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
1 Isimo sezulu sokuhla: Iberdrola
2 I-Telefónica, ngamaxabiso asezantsi kakhulu
3 Mediaset kunye namandla esahlulelo
4 Grifols: inkqubela phambili ngokuchasene ne-Alzheimer's
5 I-Enagás ngozinzo oluninzi
Isimo sezulu sokuhla: Iberdrola
Lelinye lamaxabiso akhuselekileyo e-Ibex 35 ngalo mzuzu kwaye libonakaliswa ngokuba uzinze kakhulu kwizicatshulwa zabo. Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba amaxabiso abo ngoku ahamba ngendlela ecacileyo yokunyuka. Ngcono nangakumbi, kukunyuka kwamahhala yenye yezona meko zibalaseleyo kwezokhuseleko okanye iiasethi zemali. Phakathi kwezinye izizathu kuba ayisenazo izinto ezichasayo ezifanelekileyo ngaphambili. Apho isimilo sayo silunge ngakumbi kunakwelinye ukhuseleko kwelona xesha lingathandekiyo kwiimarike zezabelo.
I-Telefónica, ngamaxabiso asezantsi kakhulu
Umnxibelelanisi wezoqhakamshelwano yeyona nto ibalulekileyo ekubheja kwimarike yesitokhwe ukuze azi imeko yemozulu kwimeko yokungazinzi kwiimarike zamasheya zamanye amazwe. Oku kungenxa yokuba iTelefonica iyaqhubeka nokuthandwa yimarike, ngaphandle kwezimvo ezithile ezimbi ezivela kubahlalutyi abathile bezemali. Ngapha koko, izisa amandla okukhula kwixabiso lezabelo zalo elinomdla kakhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngale ndlela, kufuneka kukhunjulwe ukuba iqela lonxibelelwano laseSpain lixabisile kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo malunga ne-13% kwaye kwiinyanga zokuqala zalo nyaka ikwenzile oko kumanqanaba asondele kwi-3%. Isizathu esivakalayo sokuqhubeka nokuthemba enye yeetshipsi ezinkulu eziluhlaza kuzwelonke.
Mediaset kunye namandla esahlulelo
Ewe kunjalo, asinakulibala ukuba iMediaset España yintengiso yemasheya enoburharha kwaye inegalelo ekungazinzini okukhulu kwixabiso layo lemihla ngemihla. Kodwa akucebisi ukuba uhlehlise uluvo lokuba yinkampani yesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, ehambisa esona sabelo sikhulu kubanini zabelo. Ngenzuzo ephantse ye-10% kwaye oko kunokuba sisizathu esibaluleke kakhulu sokuthatha izikhundla ukusukela ngoku.
Ayilolize, kwiminyaka embalwa ukuthatha inxaxheba kungapheliswa ngezahlulo eziqokelelwe ngalo mvuzo. Ukuphinda kabini oko kubonelelwe ziinkampani ezifanelekileyo kwimarike yesizwe. Ngelixa kwelinye icala, ihlala ikwi-incipient nditsho Oko kunokusetyenziselwa ukuqala imisebenzi yokuqala ukwenza ukonga kunenzuzo kwixesha eliphakathi nelide.
Grifols: inkqubela phambili ngokuchasene ne-Alzheimer's
Kwicandelo lokhuselo, elinye lamaxabiso elinokumangalisa abatyali zimali abancinci nabaphakathi yiGrifols, enokuthi inyuse amanqanaba amabhongo ngakumbi nakwezona meko zinzima kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, iGrifols yinkampani yamazwe aphesheya yaseSpain ekhethekileyo kwi icandelo lezamayeza kunye nelasesibhedlele, yinkampani yesithathu ngobukhulu emhlabeni kwicandelo leemveliso zegazi. Ixabiso ligcinwa malunga nee-euro ezingama-28 ngesabelo ngasinye. Kodwa ngokubanakho ukuphinda uvandlakanyo olunokufikelela kumanqanaba asondele kakhulu kwii-euro ezingama-35.
Kwelinye icala, iye yema ngexabiso emva kokubhengezwa malunga nenkqubela phambili yayo ngokuchasene ne-Alzheimer's. Kwaye apho inokunika izinto ezintsha ezinokunyusa amaxabiso ayo kutshintshiselwano lwesitokhwe. Ukongeza, ayinalo unxibelelwano olukhulu imijikelo yeshishini ke inokwenza ngcono ngakumbi kwiimeko ze-bearish kwiimarike ze-equity.
I-Enagás ngozinzo oluninzi
Okokugqibela, asinakulibala i-Enagás, enokuqhubeka nokwenza kakuhle kakhulu njengoko sele isiqhelile kwiminyaka yakutshanje. Enye yezinto ezincedisa ngokungathandabuzekiyo kule ndlela kukuba okwangoku iphantsi komfanekiso ukwanda ngokukhululekileyo. Yeyona iluncedo kakhulu kulo naluphi na ukhuseleko oludweliswe kwimarike yemasheya kwaye yeyona inegalelo kumngcipheko omncinci ekusebenzeni kwabasebenzisi betshintshiselwano.
Ngale ndlela, sinokuhlala sizolile xa kuvulwa izikhundla ukusukela ngoku. Kwicandelo elisebenza njengendawo yokusabela yokwenene kwiimeko apho intengiso inyanzeliswa ekuthengeni. Ngesivuno sesahlulo esimalunga ne-6% ngonyaka kwaye leyo yindlela yokumisela iphothifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa eziqwalaselweyo ezixabiso zinokuhamba kuzo zonke iimeko zeemeko, ngengqondo enye okanye enye. Ngokukhetha kukunyuka kwizikhundla kwiinyanga ezizayo, nokuba akunjalo ngembuyekezo ezingaphakamanga kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izitokhwe ezi-5 zaseSpain kwimozulu ecothayo
Ngaba lixesha elifanelekileyo lokungena eBankia?
Kufuneka wenze ntoni ukuba wenze impazamo kwintengiso yesitokhwe? Ezinye izisombululo